काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा यो साता सुनको भाउमा निकै उतार चढाव भएको छ। यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ बढे पनि समग्र यो साताभरि तोलामा ३ हजार रुपैयाँको गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७५ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी...
काठमाण्डौ । सुनको भाउमा पहिरो जाने क्रमले बिहीबार पनि निरन्तरता पाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार एकैदिन सुनको भाउ तोलामा १ हजार ५०० रुपैयाँको गिरावट आएको छ। यो गिरावटसँगै प्रतितोला छापावाल सुन ७५ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७४ हजार ७०० रुपैयाँमा झरेको छ। लगातार घटिरहेको सुनको भाउमा हिजो बुधबार तोलामा १ हजार...
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार सुनको भाउमा ठीक एक महिनाअघि अवस्थामा पुगेको छ। लगातार घटिरहेको सुनको भाउ बुधबार तोलामा एकैदिन १ हजार रुपैयाँको बढ्दै प्रतितोला छापावाल सुन ७६ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७६ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत फागुन ५ गते पनि सुनको भाउ यति नै थियो। त्यसो त सुनको भाउ फागुन २७ गते नेपालकै...
काठमाण्डौ । सुनको मूल्यमा आज मंगलबार फेरि भारी गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यो साता कोरोबारको तेस्रो दिन मंगलबार सुनको भाउ तोलामा एकैदिन २ हजार रुपैयाँको गिरावट आएको हो । यो गिरावटसँगै प्रतितोला छापावाल सुन ७५ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७५ हजार २०० रुपैयाँमा झरेको छ । यो सातामात्रै सुनको भाउ तोलामै ३...
काठमाण्डौ। सुनको मूल्यमा लगातार खसिरहेको पहिरो थामिएको छ। यो साता कोरोबारको दोस्रो दिन सोमबार सुनको भाउ थोरै बढेसँगै पहिरो खस्ने क्रम रोकिएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै सुन प्रतितोला छापावाल ७७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी ७७ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको...
सुनको मूल्यमा पहिरो निरन्तर, आज पनि तोलामा एकैपटक रु. १५ सय घट्यो
काठमाण्डौ । सुनको मूल्यमा पहिरो खस्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार पनि सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको भाउ तोलामा एकैपटक १ हजार ५०० रुपैयाँको गिरावट आएको हो। यो गिरावटसँगै आइतबार प्रतितोला छापावाल सुन ७७ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७६ हजार...
सुनको भाउ आज एकैदिन रु. ३ हजारले घट्यो, चाँदीमा पनि पहिरो
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुन र चाँदीको भाउमा पहिरो गएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ३ हजार रुपैयाँको गिरावट आएको छ भने चाँदी ४० रुपैयाँले घटेको हो । यससँगै समग्रमा यो साता सुन प्रतितोला ४०० हजार रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदीमा ७० रुपैयाँको गिरावट देखिएको छ । यो...
उचाइबाट ओरालो लाग्दै सुनको भाउ, आजमात्रै तोलामा रु. ८०० घट्यो
काठमाण्डौ । दिनदिनै उचाइ चुमिरहेको सुनको भाउ पनि बिहीबार ह्वात्तै घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ८०० रुपैयाँको गिरावट आएको छ। यो गिरावटसँगै सुन प्रतितोला छापावाल ८१ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी ८१ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ। सुनको भाउमा हिजो बुधबार पनि तोलामा ४०० रुपैयाँको गिरावट आएको...
सुनको भाउ बढोत्तरीमा ब्रेक, आज थोरै घट्यो
काठमाण्डौ । लगातार छलाङ मारिरहेको सुनको भाउ बुधबार थोरै घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार हिजोको तुलनामा आज सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँ घटेको हो। भाउ घटेसँगै आज सुन प्रतितोला छापावाल ८२ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी ८२ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। सुनको भाउ हिजो मंगलबार तोलामा २०० रुपैयाँ बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ८२...
आज सर्वाधिक उचाइमा सुनको भाउ, किन्नेभन्दा बेच्ने बढ्दा कारोबारमा मन्दी
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उचाइ चुमेको छ। यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार स्थिर रहेको सुनको भाउ तेस्रो दिन मंगलबार फेरि तोलमा २०० रुपैयाँ बढेर सर्वाधिक उचाइमा पुगेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज मंगलबार तोलामा २०० रुपैयाँ सुन प्रतितोला छापावाला ८२ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी ८२...
जिब्रै टोक्ने गरी बढ्यो सुनको भाउ, आज इतिहासकै सर्वाधिक उचाइमा
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। यो साता कारोबारको अन्तिम शुक्रबार पनि सुनको भाउ सर्वाधिक उचाइमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार एकैदिन सुनको भाउ तोलामा १ हजार ८०० रुपैयाँले बढेको छ। यो बढाइसँगै सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ८२ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी ८२ हजार २००...
सुनको भाउमा उछाल कायमै, बन्यो नयाँ रेकर्ड, तोलाको रु. ९५ हजार पुग्ने प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउले बिहीबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। यो साता कारोबारको पाँचौँ दिन बिहीबार तोलामा २०० रुपैयाँले बढ्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। तोलामा २०० रुपैयाँ बढेसँगै बिहीबार प्रतितोला छापावाल सुन ८० हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ८० हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ। यो भाउ नेपाली सुन बजारकै इतिहासमा उच्च हो। कोरोना...
सुनको भाउमा उछाल, एकैदिन तोलामा रु. २२ सय बढ्यो, प्रतितोला कति?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउमा उछाल आएको छ। कोरोना भाइरसले विश्वबजारमा अन्य उद्योगधन्दामा मन्दी छाएसँगै सुरक्षित कारोबारका लागि सुनमा लगानी बढ्न थालेपछि यसको भाउमा उछाल आएको हो। नेपाली बजारमा आज बुधबार एकैदिन तोलामा २ हजार २०० रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुनको भाउमा उछाल आएसँगै...
सुनको भाउले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै, प्रतितोला रु. ७७ हजार नाघ्यो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ। सुनको भाउले बुधबार नयाँ उचाइ लिएको छ। आज एकैदिन तोलामा ४०० रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ नेपालको इतिहासमै उच्च विन्दुमा पुगेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन भाउ प्रतितोला ७७ हजार रुपैयाँ नाघेको छ। बुधबार सुन तोला ४०० रुपैयाँ बढेर प्रतितोला...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउले मंगलबार रेकर्ड बनाउँदै नयाँ उचाइमा पुगेको छ। सुनको भाउ मंगलबार प्रतितोला छापावाल ७६ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी ७६ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको हो। सुनको यो भाउ नेपाली बजारमा हालसम्म उच्च हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको तोलामा २०० रुपैयाँ बढ्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो।...